अब दर्ता नगरी कुकुर पाल्न नपाइने, कुकुर छाडा छाडे १५ हजार जरि’वाना ! – Dainik Sangalo
अब दर्ता नगरी कुकुर पाल्न नपाइने, कुकुर छाडा छाडे १५ हजार जरि’वाना !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०९, २०७८ समय: १६:५४:५६
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले दर्ता नगरी कुकुर पाल्न नपाउने नियम बनाइएको छ । जथाभावी छाडा छोडिएका कुकुरका वातावरणमा ग’म्भीर असर परेपछि महानगरले कुकुर पालन गर्दा अब दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । दर्ता गरेर कुकुर पालन गर्ने प्रणाली पोखरा महानगरले पहिलोपटक सुरु गरेको हो ।
शुक्रबार पोखराको वडा नम्वर ८ बाट दर्ता र पालन अनुमतिपत्र वितरणको शुभारम्भ गरेको छ। महानगरले अब छाडा कुकुर छाड्नेलाई ५ देखि १५ हजारसम्म जरिवाना तिराउने पनि जनाएको छ। दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएर कुकुर पालन गर्दा वातावरण स्वच्छ हुने र रेबिज विरु’द्धको खोप कार्यक्रममा पनि सहयोग पुग्ने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले कुकुर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अब छाडा छाडिने कुकुर पाल्ने मालिकको पहिचान गर्न र कारवाही गर्न सजिलो भएको छ । पशु सेवा शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारीका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार महानगरभित्र १ सय ४० कुकुरको दर्ता भएको छ । वडा नम्बर ८ मा मात्रै ७८ पशुधनीले कुकुर दर्ता गरेका छन् । बिहीबार सुरु भएदेखि निरन्तर दर्ता प्रक्रिया चल्ने उनले बताए ।
सदरमुकाम दमौलीस्थित दमौली अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएका छन् । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये करिब १५ प्रतिशत भाइरल ज्वरोका बिरामी रहेको सो अस्पतालले जनाएको छ । अहिले दैनिक अस्पतालमा २०० देखि २५० जनासम्म अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
फेरी बढ्न थाले अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीमेयरले गरेको भ्रष्टाचारबारे कर्मचारीले पत्रकारलाई सूचना दिए, मेयरले गरे कर्मचारीको कार्यालयमै धु’लाईसामाजिक सञ्जालमा
Last Updated on: September 25th, 2021 at 4:54 pm